NY VALINTENY NY MPISOLOVAVA AN-TSERASERA HO MAIMAIM-POANA
NY VALIN NY MPISOLOVAVA AN-TSERASERA HO MAIMAIM-POANA
Ao amin’ity fizarana ity Dia afaka mahita ny famerenana ny mpisolo vava mandray anjara ao amin’ny vavahadin-tserasera ny mpampiasa.
Raha toa ka manana fanontaniana izay te-hahazo torohevitra araka ny lalàna amin’ny endrika review ny mpisolovava na ny mpisolovava manokana ao amin’ny lavitra fomba, dia afaka mameno ny endrika omena eto ambany ny mandefa ny fangatahana.
Ara-dalàna io tolotra maimaim-poana, izay mety mametra ny an-tsipiriany ny endriky ny valin ireo fanontaniana ireo, toy ny fanomanana ny fehin-kevitra ofisialy ny manam-pahaizana manokana dia mety maka fotoana sasany amin’ny fianarana fanampiny ny rafitra ara-dalanan’ny fananantany sy ny tsipiriany ny toe-javatra ny raharaha, ary izany no nandoa fanompoana.
Mba mangataka ny fanontaniana ao amin’ity fizarana ity, dia tsy maintsy miditra ao amin’ny tranonkala.
Koa, raha te-hiresaka momba ny olana amin’ny mpampiasa hafa tsy nisoratra anarana ao amin’ny vohikala, dia afaka mangataka izany eo amin’ny sehatra fiadian-kevitra anatin’ny vondrona ny fikambanana mpisolovava
Raharaham-Barotra Ady Ny Mpahay Lalàna Ara-Dalàna Mifanaraka Amin'ny Lalàna Momba Ny Trano Famakiam-Boky